SU'AALAHA Barnaamijka Usheeg-Saxiibkaa/taa Adeega TalkRemit : TalkRemit Customer Portal
Solution home Somali FAQs Barnaamijka Gudbin
SU'AALAHA Barnaamijka Usheeg-Saxiibkaa/taa Adeega TalkRemit Print
Modified on: Thu, 20 Aug, 2020 at 8:41 AM
Barnaamijka Usheeg-Saxiibkaa/taa Adeega TalkRemit wuxuu ahaa guul weyn oo ay ka faaideysteen macaamiisheena badan kood. Nasiib darro, macaamiil badan ayaa si khaldan u isticmaalay adeega ayagoo ka hor yimid shuruudaha u dajisnaa barnaamijka. Wexey noqotay inaan joojinno barnaamijka gabi ahaantiba. Sidaa owgeed, ma aanan awoodin inaan bixinno abaal marinihii macaamiisha eey heli lahaayeen.
Waxaan baarnay shaqsiyaadka adeega si khaldan u isticmaalay oo qaarkood lacagaha abaal marinta nafsaddooda isu soo wareejinayay iyadoo taasi eey ka hor imaaneyso shuruudaha barnaamijka. Macaamiisha ka bari noqday jibinta shuruudaha uyaalay barnaamijka ayaa lacagahoodi abaal marinta si toos ah u helay. Kuwii eey ku cadaatay ineey barnaamijka si khaldan u isticmaaleen ayaa laga joojijayay ineey helaan abaal marintaa oo qaarkoodna waxaa gabi ahaanba laga xiray akoontiyadooda si eey mar kale u isticmaalin adeega TalkRemit.
Waxaa wax laga xumaada ah in dhowr qof oo macaamisha ka mid ah oo si xun u isticmaalay adeegena eey ka hor istaageen macaamiisha kale ineey ka faaideeystaan adeeg abaal marinta usheeg-saxiibkaa/taa.
Si walbo hanoqotee, runtii waan u mahadcelineynaa macaamiisheena daacadda ah. Barnaamijkaa la joojiyay kali ah kuma eka abaal marintu. Barnaamijya kale ayaan soo wadnaa oo aan ooga faraxsiineyno macaamiisheennu. Fadlan lasoco oo kafiirso aapka iyo emayladda abaal marinnaha soo socda. Sidoo kale booqo boggayaga xiriirka (https://talkremit.com/contact) si aad noogala soo xiriito arimaha kusaabsan barnaamijka usheeg-saxiibka/taa adeega TalkRemit.